M/weyne ku xigeen Puntland oo amar ku bixiyey in la banneeyo xeryaha dawlada ee magaalada Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Galkacyo, Sept 04 – Wareegto ka soo baxday xafiiska m/weyne kuxigeenka Puntland ee magaalada Galkacyo, ayaa lagu muujiyey in laga guuro xeryihii ay lahayd dawladdii hore ee Soomaaliya, gaar ahaan xerayaha Dayax iyo Warshad-Gallay oo ay haatan deggan-yiin dad shacab ah.
Qoraalka m/weynaha ayaa lagu muujiyey sababta hadda dhalisay in dawladdu ay amar ku bixiso ka guuridda xeryahaasi, waxaana lagu sheegay, in ay tahay sababtu kadib maarkii ay isi soo tareen cabashooyinka ka soo yeerayaha dadka deggan aggagaarka xeryahaasi kuwaasi oo ka astakoonaya qashinka oo la dhoobo halkaasi iyo maan-dooriye xeryahaasi laga isticmaalo.
Muddo saddex maalmood ah ayaa loo qabtay dhammaanba dadka deggani in ay iskaga guuraan xeryahaasi, waxaana dhanka kala loogu goodiyey ciddii amarkaasi diidda in ay la kulmi doonto ciqaab sharciga waafaqsan.
Dawladdu waxay tilmaantay goobahaasi marka la banneeyo kadib in loo isticmaali doono, waxyaabo nafaaci u leh bulshada sida suuqyo wax lagu kala iibsado.
Waa markii ugu horraysay oo mas?uul ka tirsan madaxda sare ee dawladdu uu amar ku bixiyo in la banneeyo xeryaha Dayax iyo Warshad-Gallay ee magaalada Galkacyo, kuwaasi oo inta badan lagu eedeeyo in qayb weyn ka yihiin nadaafad darrada iyo waliba amni xumada.